★မြန်မာ့အလင်း★: စေတနာဆိုတာ ကျွန်ကုလားနဲ့ မတန်ပါ . . ဒန်.. ဒန်. .. ဒန်
စေတနာဆိုတာ ကျွန်ကုလားနဲ့ မတန်ပါ . . ဒန်.. ဒန်. .. ဒန်
သတင်းတွေထဲမှာ ကုလားတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို မြင်ပြီး သနားတဲ့သူတွေရှိမှာပါ။ လိုရင်း တိုရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် မသနားပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ ဆက်ရှင်းပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘာသာရေးအယူဝါဒဟာ လူသားတွေအတွက် အရမ်းကို အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ကြရမှာပါ။ မွတ်ဆလင်တွေမှာ သဘာဝ ဘေးဆိုတဲ့ အယူအဆ မရှိပါဘူး။ ရေကြီး၊ မြေငလျင်လှုပ် ၊ မုန်တိုင်း . . စတဲ့ ကိစ္စတွေကို Allah က ဒေါသထွက်ပြီး လုပ်တယ်လို့ ယူဆထားပါတယ်။ အခုပါကစ္စတန်ရေကြီးတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း Allah က ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘာသာခြားဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် တွေက ကုလားတွေကို သနားနေတာကို မြင်ရပေမယ့် မွတ်ဆလင်တွေကတော့ ပါကစ္စတန် ကုလားတွေကို လုံးဝ မသနားကြပါဘူး။
တာလီဘန်ကို ထောက်ပံ့လို့၊ မွတ်ဆလင်လို ပီပီပြင်ပြင် မကျင့်ကြံလို့၊ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်လို့ စတဲ့ စွဲချက်တွေအများကြီးနဲ့ အပြစ်ပဲပြောကြပါတယ်။ (Allah ကို အပြစ်တင်လို့ မရတော့ အချင်းချင်းပဲ အပြစ်တင်ရမှာပေါ့) တကယ်တော့ တာလီဘန်ဆိုတာ ဆော်ဒီမှာ ကျင့်ကြံနေတဲ့ wahhabi ဂိုဏ်းရဲ့ ဆင့်ပွားသာဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဂိုဏ်းကွဲတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကြား kaffir တွေလို့ စွတ်စွဲတာ မဆန်းပါဘူး။ sunni ၊ shiite ၊ wahhabi တွေအကြား kaffir တွေလို့ စွတ်စွဲတာ အမြဲဆိုသလိုပါပဲ။ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်တာတွေကလည်း အမြဲရှိနေပါတယ်။ တာလီဘန်ကို ထောက်ခံလို့ ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာ sunni တွေက တာလီဘန်ကို ၀ါဒရေးရာအရ တိုက်ခိုက်တဲ့ နည်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလဲ sunni ပလီတွေကို တာလီဘန်တွေက သိမ်းပိုက်တာတွေ ရှိနေတာကိုး။ ကုလားတွေ အပြစ်လုပ်ထားလို့ ခံရတာပဲ.. ခံပါစေဆိုတဲ့ အပြောမျိုးတွေပဲ ပြောကြပါတယ်။
ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင် ၀က်ဆိုက်တွေမှာလည်း. . . တိုင်းပြည် ပျက်လုနီးပါး ဖြစ်နေတဲ့…. ကုလားတွေ ရေဘေးကိစ္စကို စကားထဲတောင် တည့်ပြောတာ မလုပ်ကြပါဘူး။ ကျုပ်နောက်နေတယ်ထင်ရင် ကျွန်ကုလားတွေရဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေမှာ လိုက်လံပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။ တခြားနိုင်ငံက မွတ်ဆလင် ၀က်ဆိုက်တွေမှာလည်း ရေဘေးကိစ္စကို သိပ်ပြီး အကျယ်ချဲ့မရေးကြပါဘူး။ နှုတ်ပိတ်နေကြပါတယ်။ ဒါကလည်း အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Allah ဘာလုပ်လုပ် ငြိမ်ခံနေရမယ်လို့ ဆုံးမထားတဲ့ အယူဝါဒတွေကြောင့်ပါ။ ဒီတော့ Allah က ကုလားတွေကို အပြစ်ပေးတယ်လို့ ယူဆပြီး သူတို့ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း မျက်ကွယ်ပြုထားတာပါ။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ကုလားတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာ သနားပါတယ်လို့ ပြောရင်.. Allah ဟာ လူတွေအပေါ်မှာ ရက်စက်တယ်လို့ ပြောတာနဲ့တူနေမှာ မိုလို့ အဲဒီစကားကို မပြောကြတာပါ။ ပလီတွေအနေနဲ့ ရေဘေးကူညီရေး လုပ်ရင် Allah ကို ဆန့်ကျင်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ (ပလီဆရာတွေက ရေဘေးအလှူခံရင် ပိုက်ဆံတွေကို သူတို့ အိပ်ထဲ ထည့်မှာပါပဲ) တနည်းအားဖြင့် ပလီဆရာတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ Allah ကို မယုံကြည်တော့ဘူးလားလို့ မေးခွန်းထုတ်နိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်သွားမှာပါ။
ဒါ့ကြောင့်လည်းပဲ သတင်းတွေမှာ ကြည့်ရင် မွတ်ဆလင်တွေလုပ်ဆောင်ချက်ကို မြင်ရမှာ မဟုတ်ပဲ.. မွတ်ဆလင် မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံ သားတွေက ကူညီပေးနေတာပဲ မြင်ရမှာပါ။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ အရမ်းကို ယုတ်ညံ့တဲ့ အယူဝါဒပါပဲ။ အဲဒီဝါဒီတွေ စိတ်ဝင်စားတာကတော့ . . . Jihad နာမည်နဲ့ လူသတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အိမ်ရှင် အမျိုးသမီးလေးတွေကို စော်ကားဖို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းလုပ်ရမှာကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဆန္ဒပြရမယ်ဆိုလည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ စစ်တိုက်ရမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အညှီရှိရာ ယင်ကောင် အုံသလိုပဲ.. မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေမှာ ကုလားတွေကို လက်ညှိးထိုးမလွဲ အောင် မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သဘာဝ ထိမ်းသိမ်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ ကုလားတွေကို ရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကုလားအချင်းချင်းတောင် သနားမခံရတဲ့ ပါကစ္စတန်တွေ. . . လူ့လောကကြီးကို မကောင်းကြံနေတဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ ၀ါဒီတွေကို. . . သူ့ဖာသာ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေ။ သနားပြီး ကူညီချင်တာတွေ ဘာတွေဖြစ်မနေပါနဲ့။ စေတနာဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့မတန်ပါဘူးဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ရှိနေရင်. .. . . လူစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ ကျွန်ကုလားနဲ့ စေတနာဟာ လားလားမှ မဆိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာပါပဲ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:20 AM